बारामा १२ राउन्ड हवाइ फायर, ४० गाउँले घाइते
Saturday, 30 June 2012 15:07	नागरिक
रितेश त्रिपाठी, (चैनपुर), असार १६ (नागरिक)- बाराको चैनपुरस्थित चचान ग्रुपले सन्चालन गरेको उद्योगबाट निस्केको प्रदुषण रोक्न दबाब दिन गएका स्थानीयवासी र प्रहरीबीच आज झडप भएको छ । झडपमा ४० भन्दा बढी गाउँले घाइते भएका छन् ।
लाजिम्पाटमा सडक विस्तार सुरु (फोटो फिचर)
Saturday, 30 June 2012 11:52	नागरिक
काठमाडौं, असार १६- काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित खानी विभागदेखि महाराजगन्जसम्म सडक विस्तार कार्य आज बिहानबाट भइरहेको छ। यसअघि स्थानीयवासीको विरोधका कारण स्थगन भएको विस्तार कार्य सरोकारवालासँगको सहमतिपछि आजबाट सुरु भएको हो।
'अब कहाँ बस्ने?'
Saturday, 30 June 2012 08:53	नागरिक
कलेन्द्र सेजुवाल, सुर्खेत, असार १६- जिल्ला वन कार्यालयले वनक्षेत्रमा रहेको घर जलाएपछि कल्यानकी तुलसी सार्कीको उठिवास भएको छ। कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियामा बिहीबार १५ वर्षदेखि बस्दै आएको उनको टहरोमा आगो लगाएको छ। 'अरुका त गाउँमा पनि घर छन्, त्यहीँ जालान्,' ६७ वर्षीया तुलसीले भनिन्, 'हाम्रो श्रीसम्पति यही थियो, आगो लगाए, कसरी बाँच्ने?'
फाँट साँगुरियो, रोपाइँ घट्यो
Saturday, 30 June 2012 08:52	नागरिक
सन्तोष न्यौपाने- हेर्दाहेर्दै बडिखेलले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। ५८ वर्षे कान्छी केसी परिवर्तनको साक्षी हुन्। उनको परिवारले २८ वर्ष अघि घर बनाउँदा वरिपरी कसैको घर थिएन्। एकलासको घर भएकाले उनलाई त्यतिबेला खुब डर लाग्थ्यो। ठूलो जंगल।
कैलालीमा ९५ प्रतिशत जमिन बाँझो
Saturday, 30 June 2012 08:51	नागरिक
दिलबहादुर छत्याल, धनगढी, असार १६- सदरमुकाममा औपचारिकता दिन धान दिवस मनाइराखेका बेला गाउँमा किसान भने खडेरीले सुकिरहेको बिउ हेरेर निराश भइरहेका थिए। असार १५ मा पनि कैलालीमा पानी अभावले ९५ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ हुन सकेको छैन। रोप्नका लागि छरेको बिउ पनि सुक्दै गएको छ। आधाभन्दा बढी रोपाइँ भइसक्नुपर्नेमा प्रायः खेत बाँझै छन्।
हिलो खेल्न अमेरिकादेखि
Saturday, 30 June 2012 08:32	नागरिक
सन्तोष पोखरेल, पोखरा, असार १६- अमेरिकाको नोट्रेडम विश्वविद्यालयमा स्नातक तह अध्ययनरत कार्ल सिलिमन केही दिनदेखि पोखरामा छन्। पहिलो पटक नेपाल घुम्न आएका उनी शुक्रबार निकै खुसी देखिन्थे। असारे महोत्सवमा हिलोमा रमाउन पाएका उनमा खुसीको सिमै थिएन।
धान रोप्न सिक्दै विद्यार्थी
Saturday, 30 June 2012 08:29	नागरिक
चाँदनी हमाल, हेटौंडा, असार १६- धान दिवसका दिन शुक्रबार कृषिको महत्व दर्शाउँदै हेटौंडामा विद्यार्थीले रोपाइँ गरे। हेटौंडा-५ पिप्लेस्थित ईश्वरी पराजुलीको खेतमा मध्याह्न जम्मा भएका विद्यार्थीले हिलो खेल्दै, दोहोरी गाउँदै र दही चिउरा खाँदै असार १५ पनि मनाए। धान रोपाइँको सुरुवातमा स्थानीय किसान महिलाले रातो टिका लगाएर स्वागत गरे।
उपसभापति पौडेल अस्पतालबाट 'डिस्चार्ज'
Friday, 29 June 2012 21:44	नागरिक
काठमाडौं, असार १५- नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्तपालबाट आज अपराह्न 'डिस्चार्ज' भएका छन्। निमोनिया र उच्च रक्तचापको समस्या देखिएपछि गत आइतबार शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका पौडेल स्वास्थ्यलाभ गरेर घर फर्केका हुन्।
Friday, 29 June 2012 19:03	नागरिक
महेन्द्रनगर, असार १५ (नागरिक)- कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा शुक्रबार छोराले आमाको हत्या गरेका छन्। कृष्णपुर-२, बंक गाँउमा १३ वर्षीय छोरा मोहन धामीले ३५ वर्षीया आमा कलावति धामीको हत्या गरेका हुन्। सात कक्षामा पढ्ने मोहनले आमा कलावतिलाई बञ्चरो प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्।